JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ်အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အို တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ မူဆယ် - နမ့်ခမ်းကြား နမ့်အွမ့် တွင် အောက်တိုဘာ (၅) ရက်နေ့က ဗမာစစ်တပ်အချင်းချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သသင်းရရှိပါသည်။ သတင်းအပြည့်မစုံကို မသိရှိရသေးပါ။ ဗမာစစ်တပ်များသည် ယခုကဲ့သို့ အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှု အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ဤသို့ အချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဗမာအစိုးရမှ ကေအိုင်အို အစိုးရ နယ်မြေများသို့ စစ်အင်းအား အမြောက်အများ ပို့ဆောင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
There was the fighting each other between the Burmese Government’s different troops in Nam Un, between the Muse and Nam Hkam road, on 5th October according to the KIA front-line report. But no detail report is coming yet. Actually, such kind of wrong fighting, in the same Burmese Government group but in different troops, happens often because the Government sends many troops in the KIO controlled areas.
grai kaja ai shi ga
Dau je Mile said...